Wararkii ugu dambeeyay howl gallo ka socda Maqaayadda Pizza House iyo Ciidamada Gaashaan oo gudaha u galay – Hornafrik Media Network
Wararkii ugu dambeeyay howl gallo ka socda Maqaayadda Pizza House iyo Ciidamada Gaashaan oo gudaha u galay
Inta la xaqiijiyay illaa iyo 15 qof ayaa ku dhimatay qaraxa, waxaa laga yaabaa in khasaaraha intaas ka bato, waxaa la sheegayaa in dadka dhintay uu ku jiro Nin Suuriyaan ah oo ka shaqeynayay Maqaayadda Pizza House.
Labada Maqaayad ee la weeraray Pizza House iyo Posh Treat ayaa ah kuwo iska soo horjeeday, waxaana uu si isku mid u saameeyay qaraxa, inkastoo dableyda la sheegay inay galeen maqaayadda Pizza House oo ay ku qaldeen Posh Treats, sida ay sheegeen laamaha ammaanka.
Ciidamada ammaanka Soomaaliya waxay sidoo kale ka soo badbaadiyeen dad isugu jira ajaaniib iyo Soomaali ka soo bad baaday Maqaayada Posh Treats oo iyada Maqaayadda kale uu Qaraxa burburiyay.
Wararka ayaa sheegaya in in dadka la soo bad baadiyay ay isugu jiraan Itoobiyaan iyo Kenyan oo shaqaale ka ahaa Maqaayada Posh Treats.
Sidoo kale waxaa la soo bad baadiyay dad kale oo ahaa dadkii maqaayada ka cunteynayay, waxaana markii hore jiray xaalad hubaal la’aan.
Warar kala duwan ayaa markii hore ka soo baxaya qaraxa oo bartilmaameedkiisa la sheegay inuu ahaa maqaayada Posh, hase ahaatee waxaa muuqata in qaraxyada ay si isku mid u saameeyeen labada Maqaayadood ee Pizza House iyo Posh Treats.
Maleeshiyaadka ku jira Maqaayadda Pizza House waxa ujeedkoodu ahaa inay galaan Maqaayadda Posh Treats sida ka muuqata Wararka ay faafinayaan Website yadda ku hadla Magaca kooxdaasi oo ku faanaya inay weerareen siday sheegteen Maqaayad lagu tunto oo lagu magacaabo Posh Treats.
Waa Sidee Xaaladda Maqaayadihii Xalay la weeraray ee Degmadda Hodan.?+Sawiro